Androm-bavaka maneran-tany :: Nitondra am-bavaka ny firenena ireo mpino kristianina • AoRaha
Androm-bavaka maneran-tany Nitondra am-bavaka ny firenena ireo mpino kristianina
Nirenty ny lokon’ny sainam-pirenena malagasy, ny sabotsy lasa teo, nandritra ny hetsika “androm-bavaka maneran-tany” na ny “ GDOP”. Fotoana izay natokan’ireo mpino kristianina tsy an-kanavaka hitondrana am-bavaka ny firenena.
Hetsika iraisam-pinoana ity notanterahina teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina ity, izay nahitana ny fiangonana zokiny sy zandriny tafaraka. “Fotoana manokana hivavahana ho an’ny firenena, ny isam-batan’olona ary ny fiarahamonina izany”, hoy Rafalimanana Kamille, tompon’andraikitra.
Mialoha ny fotoana, izay notanterahina teny Mahamasina dia nisy ihany koa ny diabe ho an’i Kristy, izay nataon’ireo mpino kristianina, niainga tamin’ny toerana samihafa. Marihina fa efa andiany fahenina ambin’ny folo ity notontosaina tamin’ny sabotsy lasa teo ity. Fotoana hiarahan’ny kristianina amin’ny firenena maherin’ny dimampolo amby zato maneran-tany, hatao mialoha ny fetin’ny Pantekoty ny “androm-bavaka maneran-tany.” Ankoatra ny fankalazana niraisana teto Antananarivo dia saika nankalaza io andro io ihany koa ny tany amin’ny faritra hafa manerana ny Nosy. Nitarika sy nikarakara ny hetsika ny avy ao amin’ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy ( FMBM).
Fanabeazana :: Sekoly tsy miankina no nahazo ny « Rallye Matematika” sokajy D
Hetsika « Sharing box » :: Manentana ny fiarahamonina hifanampy ny « Ny Ivo »